Kedu onye nwere teleprospecting? | Martech Zone
N'oge a, ọgụ dị n'etiti Ahịa na Ahịa na-eyi egwu ntụgharị, nrụpụta ọrụ na mmụọ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ azụmaahịa - ikekwe nke gị, ọbụlagodi.
Amaghị nke a metụtara gị?
Tụlee ajụjụ ndị a maka nzukọ gị:
Kedu onye nwere akụkụ nke njem ahịa ahụ?
Kedu ihe na-eme ka onye ndu ruru eru?
Kedu ihe ịga nke ọma nke onye na-eduga-azụ?
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịza ajụjụ ndị a n'ụzọ doro anya, obi ike na nkwekọrịta n'etiti Ahịa na Ahịa, ị na-ahapụ ego na tebụl. Ọtụtụ n'ime ya.
Ọ bụghị ihe ijuanya na 79% nke ahịa na-eduga mgbe ọ bụla gbanwere n'ime ahịa.
Nke a bụ otu esi atụnyere omume:
ahụkarị Ebute Ọganihu Ezigbo Ebute Ọganihu
Ire ahia na-eduga n’ire ahịa. Ahịa na Ahịa kwenyere na njirisi na iru eru.
Ahịa na-eduga na-abaghị uru, nkwụsị nkwụsị. Mgbasa ahịa na-eduga ná mbọ inbound.
Nduzi na-anwụ na osisi vaịn na-enweghị nzụlite zuru oke. Ire ahia na-azụlite, egwu na akara na-eduga n'omume site na ịre ahịa ọdịnaya na usoro.
Ahịa enweghị visibiliti na nghọta n'ime ihe kpatara ndị na - eduga anaghị agbanwe agbanwe. A na-enyefe ndị ruru eru ahịa.
Enweghị ntụkwasị obi na esemokwu juru ebe niile. Ta ụta fest soso. Ahịa na-akpọ ndị ruru eru, na-emechi azụmahịa.
Itucha. Groan. Tinyegharịa Cha-ching! Na-akpata ego, ọ nweghị mbọ na-efu na ndu adịghị mma, ọ nweghịkwa onye chọrọ igbu ibe ya.
Gụọ na infographic na-esonụ, site n'ikike nke MonsterConnect, ịmụta:
Àgwà nke mmemme ntụgharị-ala
Spotting Marketing-Ahịa dysfunctions
Ngwakọta ziri ezi maka ịgbanwere mgbanwe dị elu, mmekọrịta mmekọrịta Azụmaahịa
Shouldnye kwesịrị ịbụ onye na-elekọta ndu gen & nurturing
Kwụsị esemokwu n'etiti Marketing na Ahịa, ma mee ka ìgwè abụọ merie.
Tags: kpọọ teknụzụndu nurturingmarketingọpụpụ ahịaNa-atụ anyaahịa osoosoNkwado ire ahịaahịa infographicteleprospecting